Ciidamo Mareykan iyo Soomaali oo weerar ku qaaday saldhig ay Al-shabaab ee Shabeellada hoose – Walaal24 Newss
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabellaha hoose ee Koonfurta Somaliya Ciidamo Somali iyo Mareykan isugu jirta ayaa weerar ku qaaday deegaan gacanta ay ku hayaan Shabaab, ee degaanka Daaru-salaam.
Deegaanka weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku sugan kooxda Al-Shabaab, waxaana dad ku sugan deegankaas ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyey Ciidamada huwanta ah iyo Al-Shabaab.
Waxaa lagu soo waramayaa in dagaalka halkaasi ka dhacay uu ka dhashay khasaaro, hayeeshe aysan jirin cid weli sirasmi ah u xaqiijisay maadaama ay aheyd xilli habeen ah oo dadka badi ay wada jiifeen.
Warabahinta Dowladda ee SONNA ayaa war lagu soo qoray sheegay dagaalka xalay dhacay degaanka Daaru-salaam ee Gobolka Shabeellada hoose ayaa lagu dilay 8 ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Degaanka Daaru-salaam ayaa kooxda Al-Shabaab u ahayd muhiim, halkaas oo ay ku diyaarinjireen Qaraxyo, waxanay sidoo kale u ahayd Il dhaqaale oo ay ku uruursan jireen Lacagaha baadda ah ee ay ka dhacaan Shacabka, sida ay sheegtay Warbaahita Qaranka.
Ciidamada amnigu Soomaaliya ayaa ka mahad celiyay muwaadiniinta wanaagsan ee ka Gacan siiyay dagaalka ay kula jiraan cadawga, waxana sheegeen in ay ugu tagayaan kooxda Al-shabaab goobahooda kana qaadayaan tallaabada ku habboon.
Majirto waxyeello kasoo gaartay Shacabka howl-gallada lagu baacsanayay Kooxda Al-Shabaab, kaas oo kusoo dhammaaday si guul ah.
Waa hawlgalkii Sadexaad muddo Toban bari gudahood ah oo ay Ciidanada Qaranku ka fuliyeen goobaha ay joogaan Al-Shabaab, kaas oo muujinaya sida ay Ciidamadu u awoodaan in ay ku beegsadaan kooxda goob kasta oo ay joogaan.n
Mareynkanka oo duqeyn ku dilay mid ka mid ah dagalamayaasha kooxda Al-Shabaab
Qarax loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa oo ka dhacay magaalada muqdisho
Dhageyso+Sawiro: Shaqaallaha Maamulka Hawada Soomaaliya oo Magaaladda Muqdisho loo soo wareejiyey
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay sharciga Musuq maasuqa kana jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya